ဓာတ်ပုံဘောင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဘောင်ထုတ်လုပ်သည့်အလုပ်ရုံ၏မျက်နှာစာ၊ ပတ္တူစေးပေါ်တွင်ဆီ၊ ၁၉၀၀ ခန့်
ဓာတ်ပုံဘောင်ကအနုပညာကိုကာကွယ်ပြီးကောင်းကျိုးကိုပေးသည်။ ရိုးရာအစဉ်အလာအရရုပ်ပုံများကိုသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး၎င်းသည်အလွန်လူကြိုက်များနေဆဲဖြစ်ပြီးသစ်သားဘောင်များသည်စွမ်းအားကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သဖြင့် ဘေးတိုက်ပုံများကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးတွင်ပုံဖော်နှင့်မျက်နှာပြင်အမျိုးမျိုး အခြားပစ္စည်းများဥပမာသတ္တုပါဝင်သည် polystyrene ကဲ့သို့ငွေ၊ ကြေးဝါ၊ လူမီနီယမ်နှင့်ခိုင်မာသောပလတ်စတစ်များ၊ ဘောင်မျက်နှာပြင်သည်မည်သည့်အရောင် ယက်သားရှိပါစေ အခြားပုံသဏ္ဌာန်များစွာကိုဘောင်များထူထပ်သည့်နေရာများတွင်တွေ့ရသော်လည်းစစ်မှန်သောရွှေအတုများကိုလူတို့ကကြိုက်များနေဆဲဖြစ်သည်။ အချို့ရုပ်ပုံများသည်အသေးစိတ်အကြောင်းအရာများကိုရည်ညွှန်းနိုင်သောအသေးစိတ်ကျသောပုံသွင်းခြင်းရှိသည်။ အနုစိတ်အလှဆင်မှုများသည်သစ်သားအောက်ခံပေါ်တွင်ပုံသွန်းခြင်း၊ ဓာတ်ပုံဘောင်မှိုများသည်အမျိုးမျိုးသောပရိုဖိုင်းအမျိုးမျိုးဖြင့်လာသည်။ အဆိုပါနှုတ်ခမ်းယုန်၏အစွန်းမှအချိုးကျအကွာအဝေးကိုတိုးချဲ့သည်ဘောင်အတွင်းရှိအရာများကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရုပ်ပုံအားလှပစွာဖော်ထုတ်ရန်သို့မဟုတ်ထုတ်လွှင့်ရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
passe-partout (or mat) can be put between the frame and picture. The passe-partout serves two purposes: first, to prevent the image from touching the glass, and second, to frame the image and enhance its visual appeal.
ရှုမြင်သုံးသပ်ကြသည့်အနုပညာလက်ရာများ၏နောက်ကျောများစွာကွဲပြားသည်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရိုက်ခတ်မှုများနှင့်ဖုန်၊ အင်းဆက်ပိုးများ၊ အစိုဓာတ်နှင့်ညစ်ညမ်းမှုများဝင်ရောက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဘောင်ဝန်ထုပ်များအားလုံးသည်ခိုင်မာသော၊ သိပ်သည်းသောဘုတ်များပါဝင်သင့်သည်။  နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ချိတ်ဆွဲထားသောကွင်းသို့မဟုတ်အလားတူပူးတွဲဖိုင်များသည်ပုံသွင်းခြင်း၏ဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်အခြမ်းတွင်လုံလုံခြုံခြုံတပ်ဆင်ထားသည်။
ရုပ်ပုံဘောင်များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်စတုရန်း (သို့) စတုဂံပုံဖြစ်သော်လည်းစက်ဝိုင်းနှင့်ဘဲဥပုံဘောင်များသည်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ ဘောလုံးပုံသဏ္ဌာန်များ၊ ကြယ်များ၊ နှလုံးများကဲ့သို့သောပုံမှန်မဟုတ်သောပုံစံများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဘောင်များကိုကျွမ်းကျင်သောသစ်သားပန်းပုဆရာသို့မဟုတ်လက်သမား သို့မဟုတ်သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမှလက်ဖြင့်ထွင်းနိုင်သည်။ ထောင့်ပတ်ပတ်လည်သွားလာရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲဘောင်လည်းရှိပါတယ်။ လူကြိုက်များသောဒီဇိုင်းမှာအသဲပုံဖြစ်သည် ဘောင်အတွင်းရှိအတိမ်အနက်ကိုထည့်သည်။
မင်းသားလူးဝစ် (XIV) ဘုရင်၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ရှိသောဘားရိုးဘောင်တွင်ပုံဖော်ထားသည်။
အစောဆုံးဘောင်များသည်ပါရာမာ့မီးပုံများကိုဝိုင်းရံထားသူများဖြစ်သည်။ ပိုင်ရှင်၏နေအိမ်တွင်သေဆုံးသည့်အထိပုံတူများကိုဆွဲရန်အတွက်တုတ်အင်္ကျီဘောင်များကိုအသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ နောက်ထပ်သီအိုရီတစ်ခုမှာရုပ်ပုံများကိုသေလုနီးပါးခြယ်သထားသည်နှင့်အလောင်းကိုဆေးကြောခြင်းမပြုမီမြို့တော်ကိုအသုဘအခမ်းအနားဖြင့်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ 
↑ Lamoyne W. Durham (2008-09-18)။ PICTURE FRAME BACKING PAPER EDGE TRIMMER။ US Patent application။
↑ (2016-10-21) Mummy portraits: A visual record of changing fashions in Roman Egypt. Christies
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဓာတ်ပုံဘောင်&oldid=563633" မှ ရယူရန်
၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၇:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၇:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။